Home News Xasan Cali Kheeyre oo la Kulmay jaaliyada Beeshiisa Iyo Kuwa Ku heeybta...
Xasan Cali Kheeyre oo la Kulmay jaaliyada Beeshiisa Iyo Kuwa Ku heeybta ah Madaxweyne Farmaajo Ee Dalalka Yurub Ku Nool
Iyadoo magaalada Brussels ee dalka Belgium uu ku sugan yahay R/wasaaraha Dowlada Federaalka ah ee soomaaliya Xassan Cali Kheeyre ayaa waxaa lagusoo waramayaa in uu kala xigsaday Jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalalkaasi Yurub.
Magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa soo gaaray jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalalka yurub kuwaasi oo damacsanaa in ay la kulmaan R/wasaaraha Hase’yeeshee waa laga diiday sida aan idinkugu soo gudbinay wararkeeyni Hore.
Xassan Cali Kheeyre ayaa si aan Gambasho laheeyn waxaaa uu kulan ula qaatay Jaaliyadda Ku Beesha ah iyo kuwa Madaxweyne Farmaajo ay isxigaan waxaana intaasi ka dib lagu wargaliyay Umaddii kale in R/wsaarahu uusan Cidna la kulmeeyn.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalalka Yurub waxaa ay aheeyn kuwa mid ah islamarkaana isku Toowfiiq ah hase’yeeshee waxaa aad moodaa in hadda lagu kala qeeybiyay Booqashadii Kheeyre Ee magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Sidoo kale Xogta ay Heshay Muqdisho Online ayaa Tibaaxeeysa in ay Jiraan Odayaal u dhashay beesha R/wasaare Xassan Cali Kheeyre oo diiday in ay la Kulmaan Kheeyre,maadaama uu kala soocaayo Bulshadda Soomaaliyeed.
Kheeyre ayaa waxaa uu inta badan jecel yahay Dhalinta Qalalaasaha,waxaana tani ay qeeyb ka tahay falalkiisii caanka ahaa